“Waxaan u maleynayay in heshiiska Ronaldo uu ahaa mid aan macquul aheyn”…Giorgio Chiellini – Gool FM
“Waxaan u maleynayay in heshiiska Ronaldo uu ahaa mid aan macquul aheyn”…Giorgio Chiellini
(Juventus) 31 Luulyo 2018. Kabtanka cusub ee kooxda Juventus Giorgio Chiellini ayaa wuxuu ka hadlay saxiixa cusub ee rikoorka ah Bianconeri ee Cristiano Ronaldo.
Juventus ayaa kula soo wareegtay Cristiano Ronaldo aduun dhan 100 million euro, kaasoo ah saxiixii ugu qaalisanaa abid taariikhda ay sameesay kooxda reer Talyaani ee Bianconeri iyo horyaalka Serie A.
Giorgio Chiellini ayaa kadib marka uu soo idlaaday tababarkii maanta ay sameeyeen isla markaana uu markii ugu horeesay kala qeyb galay laacibka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo wuxuu la hadlay saxaafada.
“Markii ugu horeesay ee aan maqlay inaan lasoo wareegi doono Cristiano Ronaldo, waxaan u sheegay saaxiibadey inay tahay waxaan macquul ahayn”.
“Marna marumeysan inaan sameyn doono saxiixan, kuma aanan qabin rajo fiican ee arintan ku aadan, laakiin marka la dhameystiray heshiiska, waxaan u sheegay in waxaan macquul ahayn ay isku badaleen macquul”.
“Waa geesi xaqiiqi ah, waa nooca xidiga aan ka dooneyno inuu yimaado kooxdeena”.
“Madaxweynaha iyo tababaha sanadba sanadka kale waxay hormarinayaan kooxda, haataan waxaan kasii fiicnaanay sidii hore kadib imaatinka Cristiano Ronaldo”.
“waxaan diyaar u nahay inaan qabano shaqo dheeraad ah, waa fursad dhab ah oo aan ugu guuleeysan karno koob kasta ee suuragal ah, waa inaan gaarno ujeedooyinkeena”.
RASMI: Arsenal oo heshiis ka saxiixday da'yarkeeda cajiibka ah ee Emile Smith Rowe
“Waxaan nahay bini’aadam, qof walbana wuxuu leeyahay ceybo u gaar ah”…Hooyada dhashay Neymar oo si weyn u difaacday wiilkeeda